अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सेयर बजार अनुत्पादक हुनै सक्दैन
काठमाडौं : पुँजी बजार यतिबेला १३०० अंकको लाइन बसेको छ । औसतमा बजार घट्दो क्रममा देखिएको छ । बजार बेस्सरी घटेपछि पछिल्ला २ दिन केही सम्हालिएको छ । बजार कमजोर हुनुमा बैंकमा लगानी योग्य तरलता अभाव प्रमुख कारण हो । तरलता अभावका साथै राष्ट्र बैंकले सेयर बजारप्रति हेर्ने नजर पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
जबसम्म राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्दैन, बजार प्रभावकारी रुपमा बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । सेयर धितो कर्जामा ५०% सम्म मात्र ऋण पाउने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सेयर बजारलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । यस्तो सीमालाई हटाउनु आवश्यक छ । यी दुई कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा बजारमा अवश्य पनि केही सुधार आउँछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्तिले सेयर बजारमा बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको मात्र गरेको हो । यो बजार पहिलादेखि नै घटिरहेको थियो । उहाँको भनाईले मात्र बजार घटेको होइन तर यसले तल झार्न थप सहयोग भने अवश्य पनि पुगेको देखिन्छ । उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, त्यसको खण्डन सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेको छ । सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको भन्ने हल्ला फैलिएपछि लगानीकर्ता आत्तिए । जसको प्रभाव बजारमा पर्यो ।
सेयर बजारलाई उकास्न अब सबै भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सरकारको नै हुनेछ । किनभने यो सरकार आगामी ५ वर्षका लागि बनेको हो । सरकारले सेयर बजार सम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । नयाँ सरकार बनेको ३ साता भएको छ । अर्थमन्त्री आएको अझ त्यो भन्दा पनि कम समय मात्र भएको छ । अहिले नै सरकारको विषयमा कमेन्ट गर्ने बेला भएको छैन ।
पहिला सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्र लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी रणनीति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । अर्थमन्त्रीको भनाईको विषयमा जे कुरा बाहिर आयो, त्यो विश्लेषण पनि हुन पाएन । विश्लेषणसहित आएको भए विषय र भनाइले पनि मूर्तरुप पाउने थियो । तर यसले त केवल बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गरेको हो ।
सेयर धितोमा ५०% भन्दा बढी ऋण पाउन नसक्नु नै बजारका लागि प्रमुृख समस्या हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्को वर्ष कति मुनाफा देलान् भन्ने विषयले पनि कतिपय लगानीकर्तामा अन्योलता बढेको देख्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी बढाउन दिएको निर्देशनले पनि बजारलाई प्रभाव परेको हो । किन भने बजारमा सेयरको अधिक आपूर्तिको समस्या छ । अधिक आपूर्ति अनुसार यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नयाँ औजार आएको छैन । नयाँ लगानीकर्ता थपिन सकेका छैनन् ।
बैंकमा तरलता अभावका कारण निक्षेपमा १३, १४ प्रतिशत सम्म ब्याज पाउन केही पैसा भएकाहरु त्यतातिर पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । यसले पनि निरन्तर घटेको सेयर बजारलाई झनै तल झार्न सहयोग पुगेको देखिन्छ । लगानीकर्ताहरु घटेको बजारमा जोखिम मोलेर लगानी गर्नुभन्दा मुद्दति निक्षेपमा पैसा राख्न थालेको जस्तो पनि देखिन्छ । १८८१ मा पुगेको नेप्से सूचक अहिले एक तिहाइ नै घटेको अवस्था छ । यस्तो बेला लगानीकर्ताहरु निकै सचेत हुनुपर्छ । तर आत्तिनु भने हुँदैन ।
यतिबेला सेयर बजारमा के–के समस्या छन् र त्यसको समाधान के हो भनेर खोज्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार उत्पादक कि अनुत्पादक भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । लगानीकर्ताले सेयरमा आफ्नै पैसा वा बैंकमा ऋण लिएर लगानी गर्ने गर्दछन् । सेयर बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सेयर बजार चलायमान हुँदा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ ।
सेयर किनबेच गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि तरलता प्रभाव भइरहेको हुन्छ । सेयर कारोबारको भुक्तानी बैंक खाता वा चेकमार्फत हुन्छ । यसले वित्तीय संस्थाको कारोबारमा सहयोग पुर्याउँछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सेयर बजार कुनै पनि हालतमा अनुत्पादक हुनै सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई जे–जे आवश्यक पर्छन् ती सबै उत्पादनमूलक नै हो । यदि अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दैन वा अनावश्यक छ भने त्यस्ता पक्ष वा विषयमात्र अनुत्पादक हुन्छ ।
मानौं, कुनै व्यक्तिको घर भूकम्पले भत्किएको छ, उसले घर निर्माणमा पैसा लगानी गर्यो भने त्यसलाई उत्पादन भन्ने ? कि अनुत्पादक भनेर घर नै नबनाउने ? यस्तै, कुनै व्यक्तिले पालेको कुखुरा बेच्यो भने त्यसलाई उत्पादन भन्ने की अनुत्पादक भन्दै हिँड्ने ? तसर्थ उत्पादक वा अनुत्पादक भन्नु भन्दा पनि बजारको वास्तविकतामा ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जे आवश्यक छ, ती सबै उत्पादनमूलक नै हुन् ।
अहिले सेयर बजार ३०% हाराहारीमा घटिसकेको छ । यो अवस्थामा अब बजारले ओभर रियाक्ट गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । अहिले देखिएको तरलता अभावलाई म्यानेज गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजदर व्यावहारिक र सहज हुनुपर्छ । दीर्घकालमा बजार सुधार गर्न पहिला त सरकारको नीति कस्तो बन्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । सेयर बजार सम्बन्धी सरकारको नीतिले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । त्यसकारण सरकारको नीतिलाई पर्खनुपर्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तरलता सहजीकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । सेयर बजारलाई विभिन्न बाहनामा चर्चामा ल्याउने काम मात्र गर्नुहुन्न । सेयर बजारबाट नै भए पनि सर्वसाधारणलाई लगानी गर्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन आवश्यक पुँजीको पहिचान र परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिलेदेखि नै लगानी गर्ने बानी विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुकलाई सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको देशको रुपमा चिनाउन सकिन्छ । यसका लागि लगानी गर्ने बानीले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ ।
सेयर धितो कर्जा ५०% माथि दिनै नपाइने वाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसलाई हटाएर अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तजबिजीमा छोडिदिनु पर्छ । ताकि, वित्तीय संस्था र ऋणलाई क्षमताको आधारमा ऋण लिन–दिन सहज होस् । यसो हुन सकेमा बजार विस्तारमा निकै सहयोग पुग्छ । होल्ड गर्न सक्ने लगानीकर्ताले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन् । तसर्थ, अहिले लगानीकर्ताहरुले आत्तिहाल्नुपर्ने समय होइन ।
(विश्लेषक भट्टराईसँग नेपाली पैसाले गरेको कुराकानीमा आधारित)